သင်၏ Mac တွင်မှတ်စုရေးရန်အက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခု | ငါက Mac ပါ
ငါအကြိမ်တစ်ကြိမ်ထက်မကမှော်အားဖြင့်ကဲ့သို့အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးစိတ်ထဲသို့ရောက်ကြောင်းကိုယုံကြည်တယ် ထိုအချိန်တွင်သင်သည်အလုပ် (သို့) အိမ်အလုပ်များနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေသော်လည်းသင်ဤအတွေးကိုတစ်နေရာရာသို့မဟုတ်အခြားတစ်နေရာသို့ဘာသာပြန်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်သိသည်၊ ကံကောင်းတာက၊ ဒီအတွက်မှတ်စုယူခြင်းလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ၊ ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုတဲ့ကိရိယာများပေါ်ထွက်လာတယ် ထိုအတွေးအခေါ်များကိုရေး၊ သိမ်းပါ၊ ထပ်တူပြုပါ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ devices များအကြား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှ ဤအ applications များပြောင်းလဲပါပြီ သူတို့ကိုတစ် ဦး ပေးအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကထည့်သွင်း အများကြီးပိုအသုံးဝင်မှတ်စုများယူခြင်းထက်။ ဒီနေ့မှာသင့်ကိုသူတို့ထဲကတချို့ကိုပြပေးပါမယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့သင် Mac App Store မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကမ်းလှမ်းမှုဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးအရသာအားလုံးနီးပါးကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
အက်ပရေးရှင်းကိုကိုက်တာကိုသုံးတဲ့သူတွေအားလုံးမှာသိသာထင်ရှားတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းနဲ့စပါမယ်။ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါအခြေခံအားဖြင့်သူတို့ကိုသုံးအကျဉ်းချုပ်လိမ့်မယ်:
Es မူလအက်ပလီကေးရှင်း ကျွန်တော်တို့မှာ Mac နဲ့ Apple အက်ပလီကေးရှင်းတွေပေါ်မှာရှိတယ်၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ် application တွေမသုံးဖို့တားဆီးထားတယ်။
၎င်းကိုမှတ်စုများဟုခေါ်ပြီးမှတ်စုများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကဘာလဲတာဝန်ထမ်းဆောင် နှင့်အခြားအမှုအရာအားဖြင့်အာရုံခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီး။
ဒါဟာအလွန်ဖြစ်ပါသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာ sync.
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတိပေးခြင်းအကြောင်းတိတိကျကျပြောနေခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအကြံဥာဏ်တစ်ခု၊ စာအုပ်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအကြံပြုထားသည့်လုပ်ငန်းစာရင်းငယ်များကိုရေးချခြင်း - Mac အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းမှတ်စုအက်ပလီကေးရှင်းသည်၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ iPhone နဲ့ iPad ပေါ်မှာပါ။
လြှောကျလှာ မှတ်ချက်စာအုပ် ၎င်းသည် iPhone နှင့် iPad အတွက် Evernote အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆင်သည်၎င်းတို့၏အခမဲ့အကောင့်များရှိကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောအခါဖြစ်သည်။ အခုတော့ Mac ကိုခုန်ကူးပါမှတ်စုများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်ထားခြင်းကပျောက်ဆုံးနေသောအရာများသာဖြစ်သည်။ ကိရိယာများအားလုံးအကြားယခုဖြစ်သည်။
မင်းကြိုက်တာက မှတ်စုစာအုပ်သို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်ပုံစံ, ဒါ မှတ်ချက်စာအုပ် မင်းအဲဒါကိုချစ်သွားမှာပါ တူညီသောမှတ်စုတွင်သင်လုပ်နိုင်သည် အသံမှတ်စုများ၊ ပုံများ၊ သင်၏မှတ်စုများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သလိုစုစည်းနိုင်သည်၊ မှတ်စုစာအုပ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ သူတို့ကိုစကားဝှက်နဲ့ Touch ID နဲ့ကာကွယ်ပါ နှင့်ထို့အပြင်ကဖြစ်ပါတယ် Touch Bar နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် အသစ်က MacBook Pros ၏။
ထိပ်သို့, မှတ်ချက်စာအုပ် မှတ်စုများယူရန်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် လုံးဝအခမဲ့, Mac, iPhone နှင့် iPad များအတွက်ရနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့သင်ဟာပုံမှန်သုံးစွဲသူလိုအပ်တာထက်ကျော်လွန်ပြီးမှတ်စုရေးတဲ့အဖြေတစ်ခုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်၊ Evernote တည်ရှိဆုံးအရှိဆုံးပြည့်စုံ option ကိုဖြစ်ပါတယ်စာရင်းသွင်းပြီးနောက်၊ အခမဲ့အစီအစဉ်သည်ပစ္စည်းနှစ်ခုသာကန့်သတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော် Evernote တွင်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောအမျိုးအစားနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစနစ်ရှိသည် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည့်အခြားအားသာချက်များစွာတွင်ပုံများပါသည့်စာသားကိုပင်ရှာဖွေရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
လေကြောင်းလိုင်း သင်၏ Mac တွင် "ရိုးရှင်းသော်လည်းအစွမ်းထက်သော" မှတ်စုရေးသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ မီနူးဘားမှကိုယ်တိုင်၊ သင်သည်“ ရိုးရှင်းသောမှတ်စုမှစာသားရှည်အထိမည်သည့်အရာများကိုမဆိုချရေးနိုင်” လိမ့်မည်။, ကန့်သတ်ချက်မရှိသောကြောင့်သင်အသုံးပြုမည့်ဖောင့်ကိုပင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မြန်ဆန်။ အလိုလိုသိပြီးအလွန်ရိုးရှင်းသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတ်စုများကိုယူရန်နှင့်အခြားဘာမျှမလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်မှာ iOS အတွက်သက်ဆိုင်သောမူကွဲများသည်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါ။ သင်လိုအပ်ပါကထပ်တူပြုထားသောမှတ်စုများကိုသင်ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ Mac ပေါ်တွင်မှတ်စုများယူရန်အခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်များစွာရှိသည်။ ဤသည်သည်အလွန် Evernote ပုံစံပုံစံဖြစ်သည် အကြောင်းအရာများကိုမှတ်စုစာအုပ်များ၊ ကဏ္inများရှိမှတ်စုစာအုပ်များနှင့်စာရွက်များမှအပိုင်းများကိုစုစည်းထားသည် ဘယ်မှာသင်မှတ်စုရေးပါ စာသား၊ လင့်များ၊ ရုပ်ပုံများ၊ အသံမှတ်စုများစသည်တို့ကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။.
တာဝန်ရှိသူများကိုပြောပါ outline ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံပင်စည်, အကိုင်းအခက်များနှင့်အရွက်နှင့်အတူ, သစ်ပင်ပေါ်လာလမ်းနှင့်ဆင်တူသည်။
၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်။ ထိရောက်သောမှတ်စုယူခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ကိရိယာများအကြားထပ်တူပြုခြင်းဒါပေမယ့်စျေးပေါဘာမျှမ။ Mac အတွက်ယူရို ၃၉.၉၉၊ iPhone နှင့် iPad အတွက် ၄.၉၉ ကျသင့်သည်။
Mac ပေါ်တွင် Notability၊ Microsoft OneNote ကဲ့သို့သောမှတ်စုများကိုရေးသားရန်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများလည်းရှိပါသည်။ မည်သည့်အရာကိုသင်အသုံးပြုပြီး၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဟုအဘယ်ကြောင့်ထင်သနည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » သင်၏ Mac တွင်မှတ်စုရေးရန်အက်ပ် ၅ ခု
Foxconn နှင့် Apple တို့သည် အမေရိကန်တွင် စက်ရုံဖွင့်လှစ်ရန် စဉ်းစားနေကြသည်။